November 2018 – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေအတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသုံးဝင်မယ့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သွားများ ဖြူဝင်းစေ သွားတဲ့အခါ သွားပွတ်တံအပေါ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on မိန်းကလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေ
အသက်လေး နည်းနည်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဒူးကိုက် ၊ ခါးနာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝေဒနာတွေကို စတင်ခံစားလာရပါပြီ။ အသက်ရမှ နာတာကျင်တာတွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဒူး နဲ့ အရွတ်တွေကို သန်မာစေမယ့် သဘာဝအစားစာတွေ
တစ်ချို့မိန်းမသားတွေဟာ ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်မထိန်းနိုင်ပဲဝလာတတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ ကလေးလည်းရှိနေပြီပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းစရာမလိုတော့ပါဘူးလေဆိုပြီး နေလိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်အတွက်ရော၊ကိုယ်လှနေဖို့အတွက်ပါကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလဲ?
Girl Generation အဖွဲ့ဝင် Tiffany ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၃ဝရက်နေ့မှာ သူမရဲ့သီချင်းအသစ်လေးကို ပရိတ်သတ်တွေဆီ အရောက်ပို့ခဲ့ပါပြီ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, MusicLeaveaComment on အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tiffany ရဲ့ “Peppermint” သီချင်းလေး နားထောင်ပြီးကြပြီလား ?
မာလကာသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ သိကောင်းသိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မာလကာရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိတဲ့သူရှားပါတယ်။မာလကာရွက်က ကိုယ်တွေထင်ထားတာထက်တောင် အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်နေတာပါ။ဘယ်လိုတွေအသုံးဝင်နေတာလဲဆိုရင်… *ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ပေးတယ် ဂျပန်နိုင်ငံက ပညာရှင်တွေရဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆို မာလကာရွက်ကိုမေ့မထားသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း…
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Jung Il Woo ဟာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ရာကနေ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ မကြာခင်အနုပညာလောကထဲမှာ မြင်တွေ့ရပါတော့မယ်။HB Entertainment » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on မင်းသမီးချော Go Ara နဲ့တွဲဖက်မြင်တွေ့ရတော့မယ့် မင်းသား Jung Il Woo
တစ်ချို့တွေက ထင်ကြတယ်။မိန်းကလေးတွေက ချမ်းသာမှကြိုက်တာ၊ရုပ်ရည်ချောမောနေမှကြိုက်တာ၊ထက်မြက်ပြီး စတိုင်လ်ကျနေမှကြိုက်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းမိန်းကလေးအများစုဟာ ချမ်းသာတာ၊ရုပ်ရည်ချောမောတာတွေထက် သူတို့အားကိုးလို့ရတဲ့၊ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့သူကိုပဲ ရွေးချယ်ကြတာပါ။အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on မိန်းကလေးအများစုလိုချင်ကြတဲ့ Relationship ပုံစံမျိုးဆိုတာ…
ကိုကိုတွေ မောင်မောင်တွေရဲ့ဒီလိုအပြုမူတွေက မိန်းမသားတို့ရဲ့နှလုံးသားကို အရည်ပျော်စေပါတယ်တဲ့… ရယ်မောအောင်ပြုလုပ်နိုင်သူ ရယ်မောစရာ ဟာသလေးတွေလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို မိန်းကလေးတွေ ပိုသဘောကျပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on မိန်းမသားတို့ရဲ့နှလုံးသားကို အရည်ပျော်စေတဲ့ ကိုကိုတွေရဲ့အပြုမူ
စိတ်ပညာရှင်များကတော့ ဒီလိုအချက်တွေ မင်းတို့ Relationship မှာရှိနေရင် မကြာခင်အဆုံးသတ်မှာပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ စိတ်ချင်းမတူပေမယ့် ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် အားလုံးဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ဒီလိုအမှားတွေကြောင့် ကိုယ့် Relationship ကိုယ်ဖျက်ဆီးမိနေ
ညဘက်အိပ်ရေးပျက်တာများလာတာကို နေ့ခင်းပြန်အိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ် ပိတ်ရက်မှာ ပြန်အိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးပေါ့ပေါ့လေးမတွေးပါနဲ့။ခဏခဏ အိပ်ရေးပျက်တာများလာတဲ့အခါ ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေ သင့်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုက မဆိုစလောက်လေးပဲသိသာတာပါ။အဲ့ဒီမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အိပ်ရေးပျက်တာကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးပါနဲ့ ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရလာနိုင်ပါတယ်